Excel nahita atiny tsy voavaky
Home Products DataNumen Excel Repair Nahita votoaty tsy voavaky tao amin'ny "filename.xslx" i Excel.
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka "lesoka hita Excel tsy vakiana"
Rehefa manokatra rakitra Excel XLSX simba na simba amin'ny Microsoft Excel ianao dia hitanao izao hafatra diso izao:
Excel dia nahita atiny tsy voavaky tao. Te-hamerina ny atiny amin'ity boky fiasa ity ve ianao? Raha matoky ny loharanon'ity boky fiasa ity ianao, kitiho ny Eny.
izay filename.xlsx no anaran'ilay rakitra Excel simba na simba.
Raha misafidy "Eny" ianao, dia hiezaka ny hanamboatra ny rakitra Excel simba i Excel. Misy toe-javatra roa, toy ny etsy ambany:
1. Excel tsy afaka manamboatra ny fisie.
Amin'izay dia hasehony izao hafatra diso izao:
Tsy afaka manokatra ny fisie 'filename.xlsx' i Excel satria tsy mety ny endrika fisie na ny fanitarana ny rakitra. Hamarino fa tsy simba ilay rakitra ary mifanaraka amin'ny endrika fisie ilay fanitarana.
Ity ambany ity ny pikantsary ny hafatra diso:
2. Excel dia afaka manamboatra ny fisie.
Amin'izay dia hasehony izao hafatra manaraka izao:
Excel dia afaka nanokatra ny fisie tamin'ny fanamboarana na fanesorana ireo atiny tsy voavaky.
miaraka amin'ny atiny fanamboarana na fanesorana voatanisa etsy ambany ny hafatra.
Ity ambany ity ny santionany pikantsarin'ilay hafatra:
Aorian'ny tsindrio ny bokotra "Close" dia hanokatra ny fisie raikitra i Excel. Misy toe-javatra roa:
Misy angona azo alaina ao anaty fisie raikitra, fa angona be dia be no lost aorian'ny dingana fanarenana / fanarenana.
Tsy misy angona tena izy ao anaty rakitra raikitra aorian'ny fizotrany fanarenana / fanarenana.
Rehefa manokatra rakitra Excel XLS simba na simba amin'ny Microsoft Excel, dia ho hitanao ihany koa ny hafatra diso toy izany:
Maloto ny antontan-taratasy ary tsy azo sokafana. Mba hanandramana sy hanamboarana azy dia ampiasao ny kaomandy Open sy Repair ao amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra Open, ary safidio ny Data Extract rehefa voaray.
Raha misafidy "OK" ianao, dia hiezaka ny hanamboatra ilay rakitra Excel maloto i Excel ary hampiseho ity hafatra manaraka ity:
Ny lesoka dia hita tao amin'ny 'filename.xls,' fa ny Microsoft Office Excel dia afaka nanokatra ny fisie tamin'ny alàlan'ny fanamboarana voalaza etsy ambany. Tehirizo ny rakitra mba haharetan'ireo fanamboarana ireo.
izay filename.xls no amboarina ny rakitra XLS maloto.
Ary ny valin'ny fanamboarana dia ho voatanisa etsy ambany ny hafatra.
Aorian'ny tsindrio ny bokotra "Close" dia hanokatra ny fisie raikitra i Excel. Na izany aza, be dia be ny dataost aorian'ny dingana fanarenana / fanarenana.
Rehefa simba ny rakitrao Excel ary misy ampahany tsy fantatry ny Excel dia hitatitra an'ity hafatra diso ity i Excel ary hanandrana manamboatra azy. Na izany aza, noho ny fahafaha-manatsara ny laoniny fanarenana ny Excel, aorian'ny fanamboarana / fanarenana dingana, dia tsy misy data marina haverina na be ny angonaost.
Azonao atao ny mampiasa DataNumen Excel Repair hamerina ilay rakitra Excel maloto, izay hanangona angona betsaka kokoa noho ny Excel.
Fisie XLS manao kolikoly: Error4.xlsx
Miaraka amin'ny asa fanamboarana namboarina nataon'i Excel dia tsy mahavita manamboatra ilay rakitra i Excel.
miaraka DataNumen Excel Repair: 100% azo averina ny angona.
Ny rakitra namboarin'i DataNumen Excel Repair: Error4_fixed.xls
Fisie XLS manao kolikoly: Error3_1.xlsx
Miaraka amin'ny asa fanamboarana namboarina an'i Excel, 0% azo averina ny angon-drakitra sela.
miaraka DataNumen Excel Repair: 61% azo averina ny angona.
Ny rakitra namboarin'i DataNumen Excel Repair: Error3_1_fixed.xls
Fisie XLS manao kolikoly: Error3_2.xlsx
miaraka DataNumen Excel Repair: 36% azo averina ny angona.
Ny rakitra namboarin'i DataNumen Excel Repair: Error3_2_fixed.xls
Fisie XLS manao kolikoly: Error3_4.xlsx
miaraka DataNumen Excel Repair: 16.7% azo averina ny angona.
Ny rakitra namboarin'i DataNumen Excel Repair: Error3_4_fixed.xls
Fisie XLS manao kolikoly: Error3_5.xlsx
miaraka DataNumen Excel Repair: 95% azo averina ny angona.
Ny rakitra namboarin'i DataNumen Excel Repair: Error3_5_fixed.xls
Fisie XLS manao kolikoly: Error3_7.xlsx
miaraka DataNumen Excel Repair: 5% azo averina ny angona.
Ny rakitra namboarin'i DataNumen Excel Repair: Error3_7_fixed.xls
Fisie XLSX manao kolikoly: Error2_1.xlsx
Miaraka amin'ny asa fanamboarana namboarina an'i Excel, 50% azo averina ny angon-drakitra sela.
miaraka DataNumen Excel Repair: 89% azo averina ny angon-drakitra sela.
Ny rakitra namboarin'i DataNumen Excel Repair: Error2_1_fixed.xls
Fisie XLS manao kolikoly: Error2_2.xls
Ny rakitra namboarin'i DataNumen Excel Repair: Error2_2_fixed.xlsx